विचित्र संसार – Lokpati.com
भारत प्रधानमन्त्री नेपाल प्रहरी चितवन अमेरिका राशिफल मृत्यु नेकपा सरकार पक्राउ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड केपी शर्मा ओली नेपाली काँग्रेस प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
लाेकपाटी न्यूज ३० भाद्र २०७६, सोमबार १२:२१ 0
एजेन्सी। अक्सफोर्डशायरको ब्लेनहेम प्यालेसबाट १८ क्यारेट सुनबाट बनेको ट्वाइलेट चोरी भएको थियो। थेम्स भ्याली पुलिसका अनुसार एउटा समूह अक्सफोर्डशायरस्थित उक्त प्यालेसभित्र प्रवेश गरेर उक्त कलाकृति चोरेका हुन्। सुनको यो ट्वाइलेट इटलीका एक…
एक महिलाले सपनामै निलिन् इनगेजमेन्टको औँठी
लाेकपाटी न्यूज ३० भाद्र २०७६, सोमबार ११:१४ 0
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाकी एक महिलाले आफ्नो इनगेज्मेन्ट रिङ्ग निलेकी छन्। जेना इभान्स नाम गरेकी ती महिलाले सपनामा आफूले इनगेजमेन्ट रिङ्ग निलेको देखेकी थिइन्। तर त्यो सपना मात्रै रहेन, उनले वास्तवमै सपनासँगै विपनामा पनि औँठी निलेकी हुन्।…
के महिलाले पुरुषसँग जबरजस्ती गरे बलात्कार मानिन्छ ?
लाेकपाटी न्यूज २८ भाद्र २०७६, शनिबार १७:४९ 0
जब कुनै पुरुषले उसको सहमति बिना महिलासँग जबरजस्ती यौनसम्बन्ध राख्छ भने त्यो बलात्कार हो। तर यदि कुनै महिलाले आफ्नो सहमति बिना पुरुषलाई जबरजस्ती गर्न बाध्य पार्छ भने के यो पनि बलात्कार होइन र ? इंगल्याण्ड र वेल्सको कानूनमा यो बलात्कार होइन…
बेस्सरी हाँस्दा एक महिलाको बंगारा फुस्कियो
लाेकपाटी न्यूज २८ भाद्र २०७६, शनिबार १४:०९ 0
एजेन्सी। स्वास्थ्यका लागि हाँस्नु निकै आवश्यक छ तर एउटा निकै अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ। एक महिला बेस्सरी हाँस्दा उनको बंगारा फुस्किएको छ जसका कारण उनले मुख बन्द गर्न सकिनन्। अन्त्यमा उनले डाक्टरको सहयोगमा समस्या सुल्झाएकी छिन्। घटना…
लाेकपाटी न्यूज २७ भाद्र २०७६, शुक्रबार १८:२९ 0
एजेन्सी। संसारमा विचित्रका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्। हालै एउटा यस्तै पत्याउन मुस्किल लाग्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। जहाँ जग्गा जमिन खरिद गर्दा पैसा लाग्दैन उल्टै सरकारबाट पुरस्कार पाइन्छ। त्यसो त मानिसहरु घरजग्गा किन्न कराडौं…
अन्तिम पटक कहिले सेक्स गर्नुभयो, फेसबुकले थाहा पाउँछ
लाेकपाटी न्यूज २७ भाद्र २०७६, शुक्रबार १६:५७ 0
तपाइँले अन्तिम पटक कहिले यौन सम्पर्क गर्नुभयो ? यो कुरा फेसबुकलाई थाहा हुन्छ। यतिमात्र होइन महिलाहरुको महिनावारी चक्र तथा उनीहरुले प्रयोग गरेका गर्भनिरोधक साधनहरुको बारेमा पनि फेसबुकले थाहा पाउँछ। प्राइभेसी इन्टरनेसनलको एक रिपोर्ट अनुसार…
७३ वर्षमा जुम्ल्याहा सन्तान, येरामतीले तोडिन् रेकर्ड !
लाेकपाटी न्यूज २० भाद्र २०७६, शुक्रबार ०९:०९ 0
एजेन्सी। ७३ वर्षीया वृद्धाले जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएकी छिन्। भारतको आन्ध्र प्रदेशको गुन्टुर जिल्लामा वृद्धाले जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएकी हुन्। महिलाको नाम येरामती मंगायम्मा हो र उनले बुधबार बिहान साढे १० बजे शल्यक्रियामार्फत् यी…
श्रीमानले अत्यधिक माया गरेकोभन्दै श्रीमतीले मागिन् ‘डिभोर्स’
लाेकपाटी न्यूज १२ भाद्र २०७६, बिहीबार १२:४२ 0
एजेन्सी। एक महिलाले आफ्नो श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेको कारण रोचक रहेको छ। बिवाहको एक वर्षपछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गर्ने सोच बनाएकी एक महिलाले श्रीमानले अत्यधिक माया गर्ने, कहिले झगडा नगर्ने भएकाले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेको…
युट्यूबमा भिडियो हेरेर महिलाले फेला पारिन् ३.७२ क्यारेटको हिरा
लाेकपाटी न्यूज ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०९:१७ 0
एजेन्सी । युट्युब हेरेर पनि मानिसहरुले नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाउने गर्दछन्। वर्तमान समयमा हरकोही मानिसहरु इन्टरनेटको प्रयोग गरेर फरक–फरक किसिमका चीजहरु खोज्ने गर्दछन्। अमेरिकामा एक महिलाले युट्यूबमा भिडियो देखेर ३ दशमलव ७२ क्यारेटको हिरा…
२२१ प्रेमीसँगकाे असफल सम्बन्धपछि कुकुरसँग विवाह !
लाेकपाटी न्यूज १८ श्रावण २०७६, शनिबार १५:१६ 0
एजेन्सी । वेलायती एक पूर्व मोडलले कुकुरसँग विवाह गरेकी छन्। ४९ वर्षीया पूर्व माेडल इलिजावेथ होडले टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा आफूले पालेको कुकुरसँग विवाह गरेकी हुन्। उनले २ सय २१ प्रेमीसँगको असफल सम्बन्धपछि कुकुरसँग विवाह…